Nke a bụ Nintendo Direct nke November | Akụkọ akụrụngwa
Nke ikpeazụ Nintendo Direct abụrụla nke mbụ mgbe nwute onye isi ala nke Nintendo ruo afọ iri na atọ, Satoru Iwata, bụ onye e ji okwu ụfọdụ nke mmetụta uche cheta Shatoru shibata, Onye isi ndị Japan na ahịa Europe, na onye kelekwara ndị na-akwado ya maka ngosipụta dị ukwuu nke ịhụnanya mgbe ewepụtara akụkọ egwu ahụ.
Este Nintendo Direct ọ fọrọ nke nta ka a chịkọta ya n’otu ahịrị: ọtụtụ nhazigharị, ọtụtụ amiibos na ọkụ ọkụ RPG ọhụrụ maka Nintendo 3DS. Site na Mundivgames, anyị na-agba gị òkù ka ị a zuru ezu anya na niile ozi ọma na nnukwu N n'ihi na ha Wii U y 3DS maka ọnwa ole na ole sochirinụ.
N'ịbanye n'okwu ahụ, ọkwa ọkwa mbụ gosipụtara asịrị nke na-ada ụda ogologo oge: mbata na Wii U nke emeghari na elu definition maka Akụkọ banyere Zelda: Twilight Princess. Agbanyeghi ikwu eziokwu, karia ịmegharia, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na enweghị nnukwu mgbanwe ọ bụla, na-enye echiche nke ịbụ mmegharị elekwasiri anya na ịpịpụta ikikere kama ịnye onye ọkpụkpọ ahụ ọhụụ ma ọ bụ nke ka mma. N'ezie, e jiri oge ahụ maa ọkwa ya ohuru amiibo de Njikọ Wolf na egwuregwu ndakọrịta Ekwenyere, nke ga-abata 4 March nke 2016, ya na onu ogugu amiibo site na usoro The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda. Banyere ọhụụ ọhụrụ na atụ anya nke saga maka Wii U, naanị sekọnd ole na ole nke ahịhịa ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na azụ nke Epona gosipụtara na ha gosipụtara anyị mgbe niile ma anyị na-etinye afọ na-esote dị ka oge mmalite. Nkwupụta ndị metụtara aha ahụ akwụsịghị ebe ahụ na mbata nke Phantom hourglass y Ckszọ egwu mmụọ na mebere console nke Wii U, yana nbudata ọdịnaya site na Akụkọ banyere Zelda: TriForce Heroes, aha nkwado nke Nintendo 3DS.
Ihe omuma ohuru nke putara ihe na ngosi nke Mario & Luigi: Akwụkwọ Jam Bros, a crossover nke abụọ sagas maka 3DS nwere otu ntụgharị ọzọ na njirimara ya. Nintendo echefughi Splatoon na obi ike na a oké update ga-abata maka ya online sweetened edinam aha si 13 maka November, gụnyere ọhụụ ọhụrụ ise na ihe ndị ọzọ; Super Mario Maker ọ ga-enwe weebụsaịtị nke raara nye ịchọta ọkwa nke ndị Fans na-awụba n'okike; e chetara anyị Xenoblade Ihe E Mere X, aha ị na-egwu ogologo oge, ga-akụ ụlọ ahịa na-esote December 4; na n'ụzọ ọsọ ọsọ egwuregwu ndị ọzọ gafere Direct, dị ka Gafe Animal: Emii Amiibo, Mario Tenis: Ultra Smash y Ylelọ Style ọhụrụ 2 nke November 20.
Nintendo nwere oge iji gosi ọsọ ọsọ ọsọ NEO, egwuregwu ọsọ ọsọ na-aga n'ihu nke ga-abụ ihe kacha nso na F-Zero nke anyị ga-egwu na Wii U na na anyị nwere ike ịtụ anya maka ọnwa Disemba. Nnukwu N hapụrụ ọha na eze ntakịrị oyi site n'ịkpọsa Nintendo Badge Arcade, aha dị ugbu a nke mejupụtara ịnweta akwụkwọ mmado nke iji chọọ menu njikwa, gụnyere ohere ịzụta ha n'ụdị igwe oghere. Pokémon, otu n'ime ndị nnọchi anya ụlọ IP nke Mario nọkwa na Direct: Pokémon Picross -crossover na saga nke ihe mgbagwoju anya na nke ahụ ga-adị na Disemba- ekwuputala, a ga-ebuputa asọmpi Pokkén na mpụga Japan na mbata nke Red, Blue na Yellow nsụgharị na mebere console -on Kama nke ahụ, n'ala nke ọwụwa anyanwụ ha nwere anụ ahụ igba egbe-.
E nyere ụbọchị mbupute nke Kpakpando fox efu, nke ga-adi na Eprel na-esote ya na, n’agbanyeghi na ndi a ma ama na-agba ya Egwuregwu Platinum - ndị isi nke Bayonetta o Nnọọ-,, ọ bụghị ihe doro anya n'etiti ọha na eze ma ọ bụ onye na-ere ahịa. Amiibos ohuru mara ọkwa na ọnwa ole na ole sochirinụ na ọnụ ọgụgụ nke Lucas -site na usoro nne- yana ogbe nke Animal agafe. A tụlere nkọwa ọhụrụ banyere Ndị dike Hyrule: Akụkọ na-emeghị eme na 3DS, dị ka nsonye nke Njikọ, nwanyi version nke njikọ, na mwepụta nke Obi ike nke abụọ nke mbụ nkeji iri na ise nke 2016 na mbata nke Dragọn ahụ Quest VII y nke Asatọ a 3DS n'ime afọ na-esote.
Oge mgbagha kachasị nke a Nintendo Direct bịara na ọkwa nke elu aha ato nke ahụ ga-abụrịrị ahụmahụ nke Akara akara ọkụ. N'otu aka, a ga-enwe ụdị abụọ nke egwuregwu ahụ, Usoro ọmụmụ y Mmeri, nke ọ bụla lekwasịrị anya n'otu akụkụ nke esemokwu agha nke atụmatụ ahụ, ma kpachara anya, na n'oge na-adịghị anya mgbe mwepụta ahụ ga-apụta otu akwụkwọ edemede ga-apụta Mkpughe. N'ezie, ndị aghụghọ enwebeghị ọchị nke aghụghọ a nke na-amanye ha inweta egwuregwu atọ ka ha nwee ike ịnụ ụtọ akụkọ ihe mere eme nke isi ọhụụ ọhụụ a. Dị ka ihe ịtụnanya ikpeazụ, mbata nke Cloud, protagonist nke kpara Final Fantasy VIInwere Super Smash Bros.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nke a bụ Nintendo Direct nke November